Chhaupadi, Fomban-drazana Nepaley manilika ny vehivavy mandritra ny fadim-bolana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2019 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, Ελληνικά, Español, English
(Lahatsoratra tamin'ny desambra 2015)
Nyaya Health: Fampianarana momba ny fahasalamana ho an'ny fiarahamonina. Sehatra an-dalambe momba ny fahadiovana amin'ny fadim-bolana sy ny fampiharana ny Chhaupadi. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'i Possible. CC By 2.0
Raha nahavita fivoarana “ara-drariny” amin'ny fampiroboroboana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy sy ny fanomezana vahana ny vehivavy i Nepal, araka ny filazan'ny Fandaharan'asam-pampandrosoan'ny Firenena Mikambana, dia mifangarika tanteraka amin'ny zava-bitan'ny firenena kosa ny vaovao momba ny ‘chhaupadi’ nipoitra tamin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Vao haingana ny Setopati, vavahadim-baovao antserasera no namoaka tatitra tamim-pireharehana milaza fa afaka tamin'ny chhaupadi ny tanàna iray ao amin'ny distrikan'i Jumla.
Tsy hisy chhaupadi ao Dhimkot ankehitriny.
Koa inona tokoa izany hoe ‘chhaupadi?
Ao amin'ny faritra lavitra sy tapany andrefana ao Nepal, araka ny fomba amam-panao an-jato taona, halavirina ireo vehivavy sy tovovavy tonga fadim-bolana, terena hijanona any ivelany ao anaty valan'omby na tranobongo mba hisorohana ny ao amin'ny fianakaviana tsy ho voaloto.
Razen Manandhar, mpanora-gazety teo aloha tao amin'ny Himalayan Times, manoratra momba ny chhaupadi ao amin'ny bilaoginy:
[…] Mino tanteraka izy ireo fa lasa maloto ny vehivavy mandritra ireo 4/5 andro isam-bolana ary tsy tian'ny andriamanitry ry zareo – “Mate”, araka ny fiantsoan'izy ireo azy ny mahita vehivavy manatona azy ireo amin'io vanim-potoana fadim-bolana io. Noho izany, dia teren'ny lehilahy hitoka-monina any amin'ny tranobongo kely na tranon'omby tsy misy varavarankely na varavarana ny vehivavy. […]
[…] Mihevitra ny lehilahy fa raha mijanona ao an-tranon'izy ireo ny vehivavy tonga fotoana, dia ho avy hanafika azy ireo na ny trano fiompian'izy ireo ny tigra. Na ho tezitra amin'izy ireo Andriamanitra ary harary izy ireo. Miahy kokoa ny andriamanitra tsy hita maso noho ny fianakaviany manokana izy ireo […]
Cecile Shrestha, tale mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana ny fandaharan'asa momba ny fahazoana rano ao amin'ny fikambanana mpanao asa soa WaterAid America, manazava ny fomba amam-panao amin'ny alalan'ny andiana sioka:
Izy ity dia “goth,” na trano kely any andrefan'i Nepal izay atorian'ny tovovavy mandritra ny fadim-bolana. “Misokatra sy miharihary”.
Tovovavy enina no nikasa hifampizara trano bongo kely iray nandritra ny alina tamin'ny fotoana nihaonanay tamin'izy ireo. “Matahotra bibilava sy ny toetr'andro aho”
Kamala, 14 taona. Aoriany ny trano kely izay atoriany mandritra ny fadim-bolany, hatramin'izy 11 taona. Orana na andro tsara
“Milaza amin'izy ireo aho fa fomba efa lany daty izany, saingy tezitra izy ireo.” Anjana, 16 taona matory any ivelany mandritra ny fadim-bolany.
Vehivavy telo samihafa taona.”Hampahatezitra an'Andriamanitra aho.” Nahoana no voaràra tsy hiditra ao an-trano mandritra ny fadim-bolana ny vehivavy?
Midika ihany koa ny fomban-drazana fa tsy mahazo mikitika boky na mandeha mianatra ny zazavavy ary voarara tsy mahazo mitondra akanjo mafana sy bodofotsy mankany amin'ilay trano bongo kely. Misy foana ny tahotra bibidia sy bibilava, tsy lazaina intsony ireo jiolahimboto.
Tsy avela mihinana sakafo mahavelona sy ronono mihitsy aza izy ireo, noho ny tahotra fa mety harary na tsy hampinono intsony ny biby.
Narahina indrindra tany amin'ireo distrika andrefana be havoana any Doti, Dadeldhura, Achham, Bajhang, Bajura, Darchula, Baitadi, Jumla, Huma, Mugu, Dolpa, Kalikot, Dailekh ary Jajarkot ny fomban-drazana, araka ny notaterin'ny Rajdhani daily.
Na ireo vehivavy mpitarika sy ny mpikatroka aza terena hanaraka ny fomban-drazana. Nanonona an'i Binita BK, mpitahiry vola ao amin'ny distrikan'i Bajura ao amin'ny Antoko Komonista Mitambatra an'ny Nepal-Maoista ny The Himalayan Times:
Hita miharihary fa faharatsiana ara-tsosialy miely patrana izany. Vokatry ny toe-tsaina mandala ny nentin-drazana izany. Saingy inona no tokony hatao, tsy manan-tsafidy hafa izahay afa-tsy ny mijanona misaraka, manalavitra ny tranonay mandritra ny fadim-bolana, rehefa ao an-tanàna izahay.
Na dia maro aza ny chhau (tranobongo kely) rava taorian'ny fanentanana fanairana notarihan'ny fikambanana tsy miankina sy niarahana niasa tamin'ireo sampam-panjakana, namboarina indray mba hitazomana ny fomban-drazana ho velona izany (tranobongo) izany tany tamin'ny toerana sasany.
Na izany aza, manohitra ny fomba nentin-drazana ireo tovovavy sy vehivavy izay mamadika azy ireo ho voahilika mandritra ny andro vitsivitsy isam-bolana. Noho ny fanentanana nataon'ny FTMF sy ireo sampam-panjakana voakasika, dia noravaina ireo trano bongo kely ary mihamaro hatrany ireo tanàna afaka amin'ny chaupadi.